Dekadda ugu horeysa ee ay Ethiopia maalgashaneyso oo la sheegay! – Hornafrik Media Network
Dekadda ugu horeysa ee ay Ethiopia maalgashaneyso oo la sheegay!
By HornAfrik	 On Jun 19, 2018
Hornafrik-Madaxweynaha maamul Goboleedka Hirshabeelle ayaa soo dhoweeyay heshiiskii Taariikhiga ahaa ee ay 16-kii Bishan wada gaadheen Dowladaha Soomaaliyea iyo Itoobiya.
Maamulka gobolka Banaadir oo burburiyay dhismayeyaal Sharci daro ahaa Gudaha Muqdisho.
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare oo ciidamada AMISOM maanta ay ka hor istaageen Garoonka Diyaaradaha.